Igumbi Labantu Ababini - I-Airbnb
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguMarzio
Igumbi eliphindwe kabini elineebhedi ezahlukanayo. Isimahla yindawo yokuqubha yangaphakathi epakini yesakhiwo, igumbi lebhiliyoni kunye ne-sauna kunye nejimu epakini, indawo yokupaka yasimahla. Isidlo sakusasa selizwekazi esiswiti nesinencasa sinikezelwa ngexabiso elongezelelweyo le-6 ye-euro ngomntu ngamnye oza kuhlawulwa ngemali kwisakhiwo.
Iindwendwe zinokufikelela kuzo zonke iindawo zeflethi, zikwazi ukufikelela kuzo zonke iindawo eziqhelekileyo ezifana nequla lokuqubha langaphandle elingaphakathi epakini lendawo yokuhlala, i-sauna kunye nendawo yokomelela, igumbi lebhiliyoni kunye nevenkile yokutyela yangaphakathi.
4.50 · Izimvo eziyi-32
Umbuki zindwendwe ngu- Marzio
Abanini bakhona kwaye bayafumaneka kwisiza imini yonke (ubusuku nemini) ngayo nayiphi na imfuno.